I-AOL Chief's Stake kwiNkampani ngoku ixabisa i-280 yezigidi zeedola - Ishishini
I-AOL Chief's Stake kwiNkampani ngoku ixabisa i-280 yezigidi zeedola
UToby Melville / Reuters
I-AOL inomphathi omnye kuphela okoko yachithwayo emva kokudityaniswa kwe-Time Warner ka-1999: uTim Armstrong.
Owayesakuba sigqeba sikaGoogle unoxanduva kuyo yonke into eyenziwe yi-AOL nengekayenzi ukusukela oko yaba yinkampani ezimeleyo ngo-2010: ukugalela imali kwiPatch emva koko kwayichitha, ukuthenga I-Huffington Post , Ukulwa nedabi le-proxy kunye ne-hedge fund Starboard Value, ukugxotha umsebenzi ngexesha lenkomfa yonke yenkampani, kunye nokonwabisa uqikelelo oluqhubekayo malunga nekamva leshishini.
Ngalo lonke eli xesha, ebesoloko ezakhela eyakhe indima kwinkampani echongwe ngokucokisekileyo kunye naye, ngakumbi ngomvuzo wakhe osekelwe kwisitokhwe, kodwa nangokutyala imali eninzi yeyakhe.
Ngo-2010, u-Armstrong wayenezabelo ezingaphezulu nje kwesigidi esinye se-AOL, malunga ne-1% yenkampani. Namhlanje, ulawula izabelo ze-5.5 yezigidi, kubandakanywa iinketho, ezixabisa i-$ 50.52 namhlanje zixabisa i-280 yezigidi zeedola. Oko kuphuma kwimpahla exabisa i-.5 yezigidi ngoMatshi ka-2010.
Izinto ezilungileyo zokuhombisa
Wathenga izabelo ze-AOL ngogonyamelo: Emva kokuba isitokhwe senkampani sinqabile emva kokuthengwa kwe-2011. I-Huffington Post , uArmstrong ithengiwe Izabelo ze-477,000 malunga ne-10 yezigidi zeedola. U-Armstrong kunye nenkampani yotyalo-mali losapho lwakhe bathenge malunga nezabelo ezingama-519,000 ngoMeyi, ngo-2010 ngexabiso elingaphantsi kwe-12 lezigidi zeedola; yonke into, uchithe ngaphezulu kwe-21 yezigidi zeedola zemali yakhe kwizabelo ezixabisa malunga nezigidi ezingama-50 zeedola namhlanje.
Isitokhwe se-AOL sele sikwinto yokukrazula mva nje, phantse i-10% kulo nyaka kwaye ngaphezulu kwe-106% kwiminyaka emihlanu edlulileyo, idlula i-S&P 500 ebanzi, enyuke nge-79% ngexesha elifanayo.
Ecaleni kwenzuzo ephilileyo kutyalo-mali lwakhe, Ukufunyanwa kwe-AOL ye-Verizon inika u-Armstrong ingqiqo ecacileyo yekamva lakhe eliqhuba i-AOL ngaphakathi kwequmrhu elisebenza kakuhle elifuna zombini ividiyo kunye nomxholo we-AOL ovelisayo, kunye neteknoloji yentengiso efunekayo ukwenza imali kuyo.
Ngeyakwahluka kakhulu ukuba i-AOL ilandele amarhe amaninzi, ekhanyelwa kakhulu, kunye ne-hedge-fund ekhuthazwayo kunye neYahoo. Apho, u-Armstrong wayeya kufuna ukujongana nokhuphiswano lwangaphakathi oluqinileyo oluvela kuluhlu olupheleleyo lwabaphathi abathe intengiso, iteknoloji yentengiso, kunye namashishini eendaba agqithe eyakhe.
NgeVerizon, ufumana inkampani enesantya esiphezulu se-intanethi kunye nemibhobho yedatha kunye nabathengi abafuna ividiyo kwiifowuni zabo, iiTV kunye neekhompyuter. 'Umdla ophambili wawujikeleze iqonga le-ad tech ukuba u-Tim Armstrong kunye neqela lakhe benze umsebenzi onzima ngokwenene,' utshilo uSekela Mongameli we-Verizon uJohn Stratton kwinkomfa namhlanje.
Umbuzo omkhulu oseleyo we-AOL kunye ne-Armstrong ayisiyiyo eyona ndawo iya kuyo, kodwa ukwakhiwa kwayo kokugqibela. Imithombo ixelele Iindaba zeBuzzFeed ngoLwesibini ukuba inkampani injalo kusenokwenzeka ukugcina ezinye iimpawu zayo ezaziwayo-kakuhle zosasazo , kuquka iindawo zobuchwepheshe Engadget kwaye I-TechCrunch . Kodwa ke I-Huffington Post , eyona inkulu kwaye ibiza kakhulu kwishishini lomxholo, inokubhengezwa.
Phinda/ ikhowudi ingxelo ngoLwesibini ukuba inkampani iintetho phambi kokuba isaziso Verizon deal ukuya vula i I-Huffington Post , mhlawumbi kumpapashi Axel Springer. Isigebenga soshicilelo saseJamani sakha ipotfoliyo enomtsalane yotyalo-mali lwemidiya yedijithali, kubandakanywa intsebenziswano kunye Ezopolitiko ukupapasha Ezopolitiko zaseYurophu kunye neestake Business Insider , Ashton Kutcher's content startup Nzakubona , indawo yeendaba egxile kulutsha Ozi , kunye nePocket app yokufunda.
Ngelixa i I-Huffington Post ibikukufumana okucacileyo kuka-Armstrong okubonakalise ukuzibophelela kwenkampani kumxholo osemgangathweni, akoyiki ukunqamla utyalo-mali olunenkathazo, njengaxa wehlisa kakhulu iPatch ngo-2013 ngamakhulu okudendwa. Naluphi na uhlobo lwe-AOL oluthatha phantsi kweVerizon, kwaye nantoni na eyenzekayo kwi I-Huffington Post , U-Armstrong ujongeka ukuba ahlale nguye owenza izigqibo ezinkulu.
I-Verizon kusenokwenzeka ukuba igcine i-TechCrunch kunye ne-Engadget
I-Verizon iThenga i-AOL nge-$ 4.4 yebhiliyoni
umbala womnyango wendlu eluhlaza okwesibhakabhaka
imifanekiso yeejack o zezibane
i-flip okanye i-flop ibamba umtshato